Laser Ka Saarida Timaha
755nm 1064nm laser garaaca wadnaha dheer
808nm laser saarista timaha
Laydhka timaha IPL
Mashiinka khafiifinta ee cavitation
Mashiinka cufnaanta ee cryolipolysis
Mashiinka khafiifinta lipo laser
Laser Ka Qaadista Tattoo
Co2 Jajabka Laser
Laser saarista xididka
Qalabka Isticmaalka Guriga
Ilkaha alaab caddeeya
Ilkaha caddeeya marinka
Ilkaha caddeeya laambadda
Su'aalaha ku saabsan mashiinada wajiga ee hydra
1. Immisa jeer ayaan sameeyaa nadiifin qoto dheer oo leh xumbo yar? Ma sax baa in si joogto ah wax loo nadiifiyo? Mashiinka miyuu maqaarka khafiifiyaa? Tayada maqaarka jidhka bini'aadamka ayaa si otomaatig ah u dhici doonta inta lagu jiro wareegga 17-28 maalmood. Markii cimrigu sii kordho, waxay ku sii nagaan doontaa maqaarka, waana sababta keenta d ...
Q mashiinka ka saarista tattoo-tirka beddelka
Dad badan ayaa u sameeya tattoos ujeeddo moodal ah, laakiin waxay rabaan inay ka saaraan waxoogaa kadib. Goobaha qurxinta, qurxinta tattoo waxay noqotay suuq cusub. Q ma iska beddeli karaa mashiinnada leysarka ee guryaha qurxinta lagu qurxiyo? Awoodda leysarka waxay noqon kartaa 250W, 500W, ama xitaa ka badan. Mashiinka masaxa tattoo waa inuu isticmaalaa la ...
sidee qalabka quruxda wajiga hydra u nadiifiyaa maqaarka?
Waxaan u maleynayaa in dad badani ay yaqaanaan qalabka quruxda wajiga ee hydra, waa mid aad loo jecel yahay hadda. Qalabkan quruxda waxaa lagu magacaabi karaa boqorka nadiifinta wajiga. Laakiin dad badani ma fahmin sababta ay si fiican maqaarka ugu nadiifin karto? maanta waxaan ka hadli doonnaa sidee qalabka wajiga hydra u kala jarayaa ...
Qalabka PDT saameyn midabyo kala duwan
Horumarka tayada nolosha ayaa dadka ka dhigay inay bilaabaan inay ku raaxeystaan ​​nolosha. Maalmahan, goobaha lagu qurxiyo qurxinta waxay noqdeen waddo dadku ugu raaxeysto nolosha. Dadku waxay rabaan inay is qurxiyaan oo aad u qurux badnaadaan. Daryeelka wajiga ayaa si dabiici ah u noqday shay caan ka ah goobaha qurxinta lagu qurxiyo. Dad badan ayaa aad u daneynaya ...
Miyuu ku habboon yahay timo saarista xilliga qaboobaha? Nooc noocee ah qalabka timo-saarista ayaa wanaagsan?
Dumarka, timaha adag daruuri maahan wax lagu farxo. Dad badan ayaa doorta inay aadaan meelaha lagu qurxiyo ee timaha laysarka bilaa bilaa xanuunka ah xagaaga. Hadda waxaa la galay jiilaal, dumar badanna waxay rabaan inay ka faa'iideystaan ​​waqtigan. Timo saarista, waxaad istusi kartaa jirkaaga marka xagaagu yimaado! Ma sui ...
Ku Saabista Timaha Laser
Fikradda ka saarista timaha laser: Ka saarista timaha laser-ka waxay ku saleysan tahay mabda'a firfircoonaanta sawir-qaadista. Adoo si macquul ah u hagaajinaya tamarta iyo garaaca wadnaha ee dhererka leysarka, leysarka ayaa dhex geli kara maqaarka dusha si uu u gaaro xididdada xididdada timaha. Tamarta iftiinka waa abso ...
MAXAA LOO DOORANAYA
No.619, Dhismaha 1, No.10 Zhuoxiu North Street, Degmada Fangshan, Beijing, Shiinaha